နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: > နားဆင်ရန် +ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် - Flash သီချင်းများ+MP3သီချင်းများ+MP4သီချင်းများ(((8)))
> နားဆင်ရန် +ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် - Flash သီချင်းများ+MP3သီချင်းများ+MP4သီချင်းများ(((8)))
May 5, '09 7:06 AM
credit : mmcyber
03. Leav Out All The Rest
Hybrid Theory is the debut album by the American nu metal band Linkin Park. Released on October 24, 2000 through Warner Bros. Records, the album wasahuge commercial success selling over 24 million units worldwide, peaking at #2 in the U.S.
1. “Papercut” - 3:05
2. “One Step Closer” - 2:36
3. “With You (Dust Brothers, Linkin Park)” - 3:23
4. “Points of Authority” - 3:20
5. “Crawling (Wakefield, Hahn, Shinoda, Bennington, Delson, Bourdon, Farrell)” - 3:29
6. “Runaway” (Wakefield, Linkin Park)” - 3:04
7. “By Myself” - 3:10
8. “In the End” - 3:36
9. “A Place for My Head” (Wakefield, Farrell, Linkin Park)” - 3:05
10. “Forgotten” - 3:15
11. “Cure for the Itch” (Wakefield, Farrell, Linkin Park)” - 2:37
12. “Pushing Me Away” - 3:12
26. Don’t Stay
Lady GaGa May 5, '09 7:02 AM
01 Poker Face (Live on AOL Sessions 2009)
02 Beautiful Dirty Rich (Live on AOL Sessions 2009)
03 Just Dance (Live on AOL Sessions 2009)
04 Lovegame (Live on AOL Sessions 2009)
05 Paparazzi (Live on AOL Sessions 2009)
06 Poker Face (Acoustic Version) (Live on AOL Sessions 2009)
01 04:02 Just Dance (Feat. Colby O’Donis)
02 03:39 Lovegame
03 03:30 Paparazzi
04 03:57 Poker Face
05 03:24 I Like It Rough
06 02:57 Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)
07 03:37 Starstruck (Feat. Space Cowboy & Flo Rida)
08 02:53 Beautiful, Dirty, Rich
09 03:43 The Fame
10 02:51 Money Honey
11 03:21 Boys Boys Boys
12 04:23 Paper Gangsta
13 04:04 Brown Eyes
14 04:15 Summerboy
15 03:42 Disco Heaven (Bonus)
16 03:05 Again Again (Bonus)
LABEL - Streamline/Interscope
RIP DATE - 02/17/2009
PLAYING TIME - 57:23 min
RELEASE SIZE - 80,10 MB
Disturbed May 5, '09 6:59 AM
09.Land Of Confusion
21.Inside The Fire
23.Down With The Sickness
04.Ten Thousand Fists
06.Down With The Sickness
01.Ten Thousand Fists
06.I Am Alive
07.Sons Of Plunder
13.God Of The Mind
15.The Game (Live)
17.Down With The Sickness (Live)
Mistake 51 Area VCD...... Apr 30, '09 1:18 PM
မိုးစက်နှင်းဆီ……သို့တမ်းချင်း Apr 30, '09 11:59 AM
၀၁။ မိုးစက်တင်လေ - ကိုင်ဇာ
၀၂။ ပဲပြုတ်သည်မထား - ငယ်ဆူး + ညီသူ
၀၃။ ဟင်္သာတို့ရဲ့နန်းတော်ရှေ့ - မာရဇ္ဇ
၀၄။ ရွှေညာသူထွေးမြ - ဗလ
၀၅။ လမ်းဘေးနားကပန်း - ဘိုဘို
၀၆။ ကိုပေါ - ဂရေဟမ်
၀၇။ အဖေ - ဘိုဖြူ
၀၈။ ဆရာမ - ဇော်ပိုင်
၀၉။ မအေးကိုချစ်လို့ ပါ … - မာရဇ္ဇ
၁၀။ ပျော်တာပေါ့အမေရယ် - စည်သူလွင်
၁၁။ လူကိုယူပါအသည်းကိုချမ်းသာပေးပါ..- ဂရေဟမ်
၁၂။ ခိုးလိုးခုလု.. - ချစ်ကောင်း + Examplez
Tags: ဇော်ပိုင်, စည်သူလွင်, မာရဇ္ဇ, ဘိုဘို, ဂရေဟမ်, ဗလ, ချစ်ကောင်း, ဘိုဖြူ, ကိုင်ဇာ, ငယ်ဆူး
ဥက္ကာဦးသာ - Remix 2005 Apr 30, '09 11:55 AM
၀၁။ ခဏ ခဏ - ဆုန်သင်းပါရ်
၀၂။ ဆယ်ခြောက်နှစ်မ - မီးမီးခဲ
၀၃။ ငါမင်းကို - အဲလက်စ်
၀၄။ ကောင်မလေး - ကြိုးကြာ
၀၅။ မင်းအတွက် - Rဇာနည်
၀၆။ အချစ်သီချင်း - အဲလက်စ်
၀၇။ တယ်လီဖုန်းလေး - ရှင်ဖုန်း
၀၈။ မဖြစ်သင့်ဘူး - မျိုးကျော့မြိုင်
၀၉။ တွေးထဲကချစ်သူ - စည်သူလွင်
၁၀။ ငါး - မျိုးမျိုး
Tags: ကြိုးကြာ, မီးမီးခဲ, စည်သူလွင်, မျိုးမျိုး, အာဇာနည်, အဲလက်စ်, ဆုန်သင်းပါရ်, ရှင်ဖုန်း, ဥက္ကာဦးသာ
ဆောင်းဦးရွက်ကြွေချစ်သက်သေ Apr 30, '09 11:54 AM
၁။ ချစ်သက်သေ - ဂရေဟမ်
၂။ အဖြေမသိတဲ့အမေး - ချောစုခင်
၃။ ရင်ခုန်ခြင်း အမှား - ဂျီလတ်
၄။ စောင့်သူ - စည်သူလွင်
၅။ မေ့မရသော - ဂရေဟမ်
၆။ အချစ်ဦး - သရဖီတင်
၇။ နှစ်သိမ့်ပေးပါ - စည်သူလွင်
၈။ ရှင်သန်ခြင်း ပြဇာတ် - ဂျီလတ်
၉။ တံခါးမဖွင့်ရဲဘူး - သရဖီတင်
၁၀။ ဆန္ဒ - ဂရေဟမ်
၁၂။ ချစ်သက်သေ - ချောစုခင်
Tags: သရဖီတင်, စည်သူလွင်, ဂျီလတ်, ဂရေဟမ်, ချောစုခင်
ကြယ်တာရာများ Apr 30, '09 11:52 AM
Tags: ရင်ဂို, စောခူဆဲ, စည်သူလွင်, မင်းထက်ကျော်ဇင်
စည်သူလွင် Unplugged Vol Apr 30, '09 11:52 AM
၁။ စည်သူလွင်, ဇော်ဝင်းထွဋ် - တားဆီးလို့မရနိုင်တာအချစ်
၂။ စည်သူလွင်, Lလွန်းဝါ - မင်းအကြောင်းအိပ်မက်
၃။ စည်သူလွင် - နယ်လွန်စိတ်
၄။ စည်သူလွင်, ဆုန်သင်းပါရ် - တို့မဝေးဘူး
၅။ စည်သူလွင် - အတိတ်အိပ်မက်
၆။ စည်သူလွင် - ငြှိမ်းသတ်လိုက်
၇။ စည်သူလွင်, ဖြိုးကြီး - ချစ်လို့မဝတဲ့ဘဝ
၈။ စည်သူလွင် - ရင်ခုန်သံဝေးဝေး
၉။ စည်သူလွင်, ချောစုခင် - အသက်လို
၁၀။ စည်သူလွင် - ကိုယ့်ကြောင့်
၁၁။ စည်သူလွင်, Rဇာနည် - ဘယ်သူမှ
၁၂။ စည်သူလွင်, ဇော်ပိုင် - သူငယ်ချင်း
Tags: ဖြိုးကြီး, အယ်လ်လွန်းဝါ, ဇော်ပိုင်, စည်သူလွင်, ဇော်ဝင်းထွဋ်, ဆုန်သင်းပါရ်, အာဇာနည်, ချောစုခင်
မိုးအတွက်မိုး Apr 30, '09 11:50 AM
၀၁။ အလွမ်းမိုးစက်များ - အဲလက်စ်
၀၂။ မိုး - ရင်ဂို
၀၃။ သိပ်ချစ်ရတဲ့မိုး - စည်သူလွင်
၀၄။ မိုးသည်းည - အဲလက်စ်
၀၅။ မေဦးမိုး - ရင်ဂို
၀၆။ မိုး - စည်သူလွင်
၀၇။ ဒီလိုမိုး - စည်သူလွင်
၀၈။ နှုတ်ဆက်တဲ့မိုး - အဲလက်စ်
၀၉။ ဇူလိုင်မိုး - ရင်ဂို
၁၀။ မိုး - စည်သူလွင်
၁၁။ အချစ်မိုး - ရင်ဂို
Tags: ရင်ဂို, စည်သူလွင်, အဲလက်စ်
စေလိုရာစေ Apr 30, '09 11:49 AM
၁။ သမန်းကျား - ဖရန်ကို
၂။ ပဲပြုတ် - မင်းခေါင်
၃။ စေလိုရာစေ - ဇော်ဝင်းထွဋ်
၄။ ပုစ္ဆာဆန်သောမိန်းကလေး - စည်သူလွင်
၅။ မိန်းကလေးကစရမှာလားရှင် - ဟေမာနေ၀င်း
၆။ ချစ်သောမောင်မောင် - ချောစုခင်
၇။ ဘယ်ပန်းချီရေးလို့ မမီ - ဟယ်ရီလင်း
၈။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိန်ခေါ်ချင်တယ် - ရင်ဂို
၉။ လွမ်းငွေ့ တဝေေ၀ - ညီပု
၁၀။ မီးပုံပွဲ - အုပ်စု
Tags: ရင်ဂို, ဖရန်ကို, ညီပု, ဟေမာနေ၀င်း, ဟယ်ရီလင်း, စည်သူလွင်, ဇော်ဝင်းထွဋ်
ဟန်းနီးမွန်းခရီး Apr 30, '09 11:47 AM
၀၁။ နားလည်ပေးပါကလေးရယ် - ချစ်ကောင်း
၀၂။ မချစ်ရင်မနေနိုင်တာကလွဲလို့ - ထွန်းအိန္ဒြာဗို
၀၃။ ဘဝကိုအရှုံးမပေးနဲ့ - ဘိုဘို
၀၄။ မိမိုး - အဲလက်(စ်)
၀၅။ မီးငယ် - ထွဏ်းထွဏ်း
၀၆။ ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ပြီးမချစ်တတ်တာတော့မှားပြီ - အေးချမ်းမေ
၀၇။ သုခုမရဲ့တေးသံပိုင်ရှင် - ချစ်စမ်းမောင်
၀၈။ မီးအိမ်ရှင်မလေး - ညီပုလေး
၀၉။ ဟန်းနီးမွန်းခရီး - စည်သူလွင်
၁၀။ ပြင်သစ်အချစ် - ကဗျာဘွဲ့မှုး
၁၁။။ မာယာ - ခမ်းဆိုင်
Tags: ခမ်းဆိုင်, ထွန်းအိန္ဒြာဗို, ထွဏ်းထွဏ်း, စည်သူလွင်, ချစ်စမ်းမောင်, ဘိုဘို, ချစ်ကောင်း, ကဗျာဘွဲ့မှုး, အဲလက်စ်, ညီပုလေး
ဟင်းလင်းပြင်အခန်းငယ် Apr 30, '09 11:45 AM
၀၁။ အချစ်သင်ခန်းစာ - ချစ်ကောင်း
၀၂။ ရေကြည်တစ်ပေါက် - ချောစုခင်
၀၃။ မျှော်လင့်ကံပါ - ဒွေး
၀၄။ အချစ်ကဗျာ - ရတီပွင့်ဦး
၀၅။ အတူတူပဲ - ဘိုဘို
၀၆။ စိတ်နဲ့အဖော် - ဂရေဟမ်
၀၇။ ဘဝပွဲခင်း - ဒွေး
၀၈။ ညပန်ချီကား - SKS
၀၉။ အနမ်းမဲ့ဝိညာဉ် - ဒွေး
၁၀။ ဝေးခဲ့တစ်ညလေး - မိုင်ရာ
၁၁။ အပြစ်မဲ့နှောင်ကြိုး - ရင်ဂို
၁၂။ အရိပ်မဲ့ - ဂရေဟမ်
၁၃။ ဒဏ်ရာလေး - စည်သူလွင်
Tags: ရင်ဂို, ချစ်ကောင်း, စည်သူလွင်, ဂရေဟမ်, ဘိုဘို, ဒွေး
စည်သူလွင် + ကဗျာဘွဲ့မှုး - အသက်လို Apr 30, '09 11:44 AM
၇။ ချစ်ပြလိုက် မုန်းပြလိုက်
၈။ ချစ်သေးရဲ့ လား
၁၀။ နောက်ဆုံးအချစ် (၂)
သီချင်းနာမည်ပေးပို့သူ - Ma Pu
Tags: ကဗျာဘွဲ့မှူး, စည်သူလွင်
စည်သူလွင် - လူနှင့်ဒိုင်ယာရီ Apr 30, '09 11:43 AM
အမြဲတမ်းအတွက်… Apr 30, '09 11:41 AM
၀၁။ အမြဲတမ်းအတွက်မင်း - စည်သူလွင်
၀၂။ ခဏခဏ - ဆုန်သင်းပါရ်
၀၃။ လွမ်းရက်တွေအကြောင်း - အဲလက်စ်
၀၄။ အချစ်ကျောင်းသူ - တင်ဇာမော်
၀၅။ ချစ်သူများရဲ့မနက်ဖြန် - ဘိုဘို
၀၆။ မိုးလောက်ကြီးချစ်ပါတယ် - ကဗျာဘွဲ့မှူး
၀၇။ ဆူးလေး - သျှီ
၀၈။ ၀ိညာဉ်တစ်ခုရဲ့ဆန္ဒ - ဂရေဟမ်
၀၉။ မျက်နှာများတဲ့မောင် - ရတနာဦး
၁၀။ ငယ်ငယ်ရေ - ထွဏ်းထွဏ်း
၁၁။ ရှားရှားပါးပါးမျက်ရည် - ချောစုခင်
Tags: သျှီ, တင်ဇာမော်, ထွဏ်းထွဏ်း, စည်သူလွင်, ဘိုဘို, ဂရေဟမ်, ကဗျာဘွဲ့မှုး, အဲလက်စ်, ဆုန်သင်းပါရ်, ရတနာဦး
ရင်ဂို - ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင် ၁၀ နှစ်ခရီး Apr 30, '09 11:39 AM
၀၁။ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင် + Rဇာနည်
၀၃။ မောပြီလား + သျှီ
၀၅။ ဆန္ဒနေ့ရက် + စည်သူလွင်
၀၇။ လွမ်းလို့ + ချောစုခင်
၀၉။ အိမ်မက်မဟုတ်ဘူး + တင်ဇာမော်
၁၂။ အိမ်မက်လမ်း + ဇော်ဝင်းထွဋ်
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:45 AM